Soo dejisan R-Studio 8.12.175.721 – Vessoft
WindowsNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaR-Studio
Bogga rasmiga ah: R-Studio
R-Studio – software aad u fiican inuu ka soo kabsado xogta lumay iyo files. R-Studio kuu ogolaanayaa inaad u soo kabsadaan files ka drives adag, flash drives, drives indhaha iyo qalab kale. Software wuxuu taageeraa nidaamka file caan ah oo u saamaxaaya in ay dhexaadka u ah jiritaanka xogta laga badiyay. R-Studio kabanayso xogta la lumay ay sabab u tahay weerar virus ama kharribeen iyo tirtiray qoruhu. Software wuxuu taageeraa gacanta ku fog iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan images of kabashada. R-Studio sidoo kale waxaa ka mid ah siladda ka dhisay-in, taas oo ay taageertaa qaabab faylka loo jecel yahay.
Kabashada haboon xogta laga badiyay iyo files
Taageerada nidaamka file caan
Waxaa la dhisay-in-siladda
Soo dejisan R-Studio
Faallo ku saabsan R-Studio
R-Studio Xirfadaha la xiriira